Antonio Conte oo la sheegay inuu Chelsea ka tegi karo! – Gool FM
(London) 31 Maarso 2017 – Wakiilka Antonio Conte ayaa hoosta ka xarriiqay in uu macallinkani doonayo ”inuu sii joogteeyo” shaqadiisa Chelsea, balse “furado cusub baa soo bixi kara haddii ay dalabyo ka yimaadaan naadiyo taariikhi ah.”
Conte ayaa haatan u sharraxan inuu Chelsea u qaado horyaalka Premier League fasalkiisii 1-aad ee Ingiriiska, balse Federico Pastorello ayaa daboolka ka qaaday in waloow uu ninkani ”bilaabi karo” meerto guuleed oo dhanka Chelsea ah inuu misna markabka oo idilba ka boodi karo haddii uu fursad helo.
“Oo Conte miyuu sii joogayaa Chelsea? Haddii uu koobka qaado, ujeedadu waa inuu taa sii amba qaadaa,” ayuu wakiilkani u sheegay GianlucaDiMarzio.com.
“Balse haddii ay dalabyo ka yimaaddaan naadiyo taariikhi ah,a ama ay fursado gaar ihi soo baxaan waxbaa is bedeli kara.” ayuu raaciyay.